Pokhara Academy of Health Science अर्थात PAHS ले खुलाएको MD/MSको आवेदन फारम भर्ने प्रक्रिया - eSewa
Pokhara Academy of Health Science अर्थात PAHS ले खुलाएको MD/MSको आवेदन फारम भर्ने प्रक्रिया
अहिले Pokhara Academy of Health Science संस्था अन्तर्गत MD/MS पाठ्यक्रमको सुरुवात भएको छ । यदी तपाईं आवेदन फारम भर्दै हुनुहुन्छ भने, रेजिस्ट्रेसनको लागि तल दिइएको प्रक्रिया अपनाउनुहोस्:
१) सर्वप्रथम PAHS को वेबसाईट http://online.pahs.gov.np/ खोल्नुहोस् ।
२) REGISTER NOW लेखिएको फारममा आफ्नो नाम, थर, बुवाको नाम, आमाको नाम, साथै देश, लिङ्ग, जन्म मिति, वैवाहिक स्थिति, फोन नम्बर, ईमेल, पासवर्डका साथै सम्पूर्ण विवरण भर्नुहोस् ।
३) Terms and conditions राम्ररी पढेर check box मा टिक गर्नुहोस् र Register मा क्लिक गर्नुहोस् ।
४) आफ्नो मोबाईल नम्बरको मेसेजमा आएको OTP code राखी अकाउन्ट activate गर्नुहोस् ।
अब, अकाउन्ट activate भइसकेपछी login मा थिच्नुहोस् र ईमेल आइ डि र पासवर्ड राखी log-in गर्नुहोस र निम्न लिखित निर्देशन अपनाउनुहोस्:
१ ) सर्वप्रथम, आफ्नो5MB भन्दा थोरै size को फोटो अप्लोड गर्नुहोस् ।
२ ) आफ्नो व्यक्तिगत विवरणका साथै धर्म, वर्ग, बुवाको व्यवसाय, व्यवसायिक क्षेत्र, आमाको व्यवसाय, र व्यवसायिक क्षेत्र भर्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस् ।
३ ) अब आफ्नो ठेगानाको विवरण भर्नुहोस् :
– नागरिकतामा स्थायी ठेगाना अञ्चलको आधारमा छ भने “पुरानो नागरिकता प्राप्त आवेदक” फारम भर्नुहोस्,
– नागरिकतामा स्थायी ठेगाना प्रदेशको आधारमा लेखिएको छ भने “नयाँ नागरिकता प्राप्त आवेदक” फारम भर्नुहोस् ।
४ ) अब, आफ्नो हालको ठेगाना, टेलिफोन नम्बरमा आफ्नो area code सहितको landline number, आवेदकको मोबाईल नम्बरमा आफ्नो मोबाईल नम्बर, र वैकल्पिक मोबाईल नम्बर भर्नुहोस् ।
५ ) यसपछी आफ्नो अभिभावकको नाम, अभिभावक सँगको सम्बन्ध, अभिभावकको टेलिफोन नम्बर र मोबाईल नम्बर भरी update and proceed मा क्लिक गर्नुहोस् ।
यसरी सबै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछी तपाईंले प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न सक्नुहुनेछ । MD/MS पाठ्यक्रमको “Apply” अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । यसरी क्लिक गरिसकेपछि शैक्षिक कोटा देखाइने छ, आफूमा लागु हुने कोटामा टिक गरी सो कोटाको लागि चाहिने सबै कागजात तयार पार्नुहोस् र चेकबक्समा टिक गरी “Apply” अप्सनमा थिच्नुहोस् । अब तपाईंले आफ्नो पढाई सम्बन्धित विवरण भर्न सक्नुहुन्छ:
१ ) आफ्नो SLC/SEE, +2 Science/ISc. र Bachelor को शैक्षिक स्तर, शैक्षिक संस्थाको नाम, अध्य्यन गरिएको देश, ठेगाना, विश्वविद्यालय, समाप्ती वर्ष, प्राप्त गरेको gradeको प्रकार र प्राप्त गरेको अंक भर्नुहोस्. “Update and Proceed” मा क्लिक गर्नुहोस् ।
२ ) अब नागरिकताको अगाडी र पछाडीको भाग लगायत पढाइ र कार्य अनुभव सम्बन्धित सबै कागजपत्रको फोटो अप्लोड गर्नुहोस् र “Submit and Proceed” मा क्लिक गर्नुहोस् ।
३ ) अब भर्ना शुल्क तिर्नका लागि इसेवामा खाता नभएमा “Generate Token” गरी टोकन नम्बर टिप्नुहोस् र नजिकको इसेवा एजेन्टकोमा गई टोकन नम्बर दिएर भर्ना शुल्क बुझाइ त्यस्को रिसिप्ट लिएर आउनुहोस् ।
४ ) इसेवामा खाता छ भने “Pay with eSewa” थिच्नुहोस् र खुलेको वेबसाईटमा आफ्नो इसेवा ID र पास्वर्ड हाली log-in गर्नुहोस् ।
५ ) Logged-in भैसकेपछी “Continue Payment” गर्नुहोस् र भर्ना शुल्कको विवरण राम्ररी हेरी “Confirm” गर्नुहोस् ।
यसरी शुल्क बुझाएको १ हप्ता भित्र admit card को लागि तपाईंको मोबाईलमा मेसेजका साथै ईमेलमा लिंक आउनेछ । अथवा, आवेदन अस्विकार भएको मेसेज आउनेछ । यसरी अस्विकरको मेसेज आएमा आफ्नो अकाउन्टमा log-in गर्नुहोस्। त्यहाँ, अस्विकार भएको कारण देखाइनेछ, यस्लाई सच्य्याइ फेरी एक पटक फारम बुझाउन सक्नुहुनेछ ।
Admit card आएपछी print गरी हाल्सालको फोटो टाल्नुहोस् र आफ्नो हस्ताक्षरका साथै औँठा छाप लगाइ परीक्षाको लागि तयार हुनुहोस् ।
Posted on December 24, 2019 December 26, 2019 by Pragati Adhikari